2 Ndị Eze 23 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
2 Ndị Eze 23:1-37
23 Eze wee zie ozi, ha wee mee ka ndị okenye niile nke Juda nakwa Jeruselem zukọta n’ebe ọ nọ.+ 2 E mesịa, eze gbagooro n’ụlọ Jehova, ya na ndị ikom niile nke Juda na ndị niile bi na Jeruselem, tinyere ndị nchụàjà+ na ndị amụma na mmadụ niile, malite n’onye nta ruo n’onye ukwu;+ o wee malite ịgụ+ ná ntị ha ihe niile e dere n’akwụkwọ+ ọgbụgba ndụ+ ahụ nke a hụrụ n’ụlọ Jehova.+ 3 Eze wee guzoro n’akụkụ ogidi+ wee ṅụọ iyi+ n’ihu Jehova na ha ga na-eso+ Jehova, na ha ga-ejikwa obi ha dum+ na mkpụrụ obi ha dum+ na-edebe ihe o nyere n’iwu+ na ihe àmà ya+ na ụkpụrụ ya+ site n’ịdị na-edebe ihe e kwuru n’ọgbụgba ndụ a nke e dere n’akwụkwọ a.+ Mmadụ niile wee soro ṅụọ iyi ahụ.+ 4 Eze wee nye Hilkaya+ bụ́ nnukwu onye nchụàjà iwu, tinyere ndị nchụàjà na-esote ya n’ọkwá na ndị nche ọnụ ụzọ,+ ka ha wepụta arịa niile dị n’ụlọ nsọ Jehova, bụ́ ndị e meere Bel+ na ndị e meere ogwe osisi dị nsọ+ na ndị e meere ìgwè ihe niile dị n’eluigwe.+ O wee suo ha ọkụ ná mpụga Jeruselem, na mbara ala Kidrọn,+ o wee kporo ntụ ha bịa na Betel.+ 5 O wee mee ka ndị nchụàjà nke chi ala ọzọ kwụsị ọrụ, bụ́ ndị ndị eze Juda nyere ọrụ isure ihe nsure ọkụ n’ebe ndị dị elu n’obodo ndị dị na Juda nakwa n’ebe ndị gbara Jeruselem gburugburu, tinyekwara ndị na-esurere Bel,+ anyanwụ na ọnwa na ìgwè kpakpando nke zodịak na ìgwè ihe niile dị n’eluigwe, ihe nsure ọkụ.+ 6 O sikwa n’ụlọ Jehova bupụta ogwe osisi ahụ dị nsọ,+ buga ya ná mpụga Jeruselem, na ndagwurugwu Kidrọn, wee suo ya ọkụ+ na ndagwurugwu Kidrọn, gweriekwa ya ka ọ ghọọ ntụ ma wụfuo ya n’ebe a na-eli+ ndị nkịtị. 7 Ọ kwatukwara ụlọ ndị ikom bụ́ ndị akwụna ụlọ arụsị+ ndị dị n’ụlọ Jehova, bụ́ ebe ndị inyom na-akpa ákwà ụlọikwuu arụsị maka ogwe osisi dị nsọ. 8 O wee kpọkọta ndị nchụàjà niile nọ n’obodo ndị dị na Juda, ka o wee mee ka a ghakwara ịnọ n’ebe ndị dị elu na-efe ofufe, bụ́ ebe ndị nchụàjà ahụ na-anọ esure ihe nsure ọkụ, malite na Giba+ ruo Bia-shiba;+ o wee kwatuo ebe ndị dị elu nke ọnụ ụzọ ámá ndị dị n’ọnụ ụzọ ámá Jọshụa, bụ́ onyeisi obodo, nke dị n’aka ekpe ma mmadụ na-abata n’ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ. 9 Ọ bụ naanị na ndị nchụàjà+ nke ebe ndị dị elu adịghị agbagote n’ebe ịchụàjà Jehova na Jeruselem, kama ha riri achịcha na-ekoghị eko+ n’etiti ụmụnne ha. 10 O wee mee ka a ghakwara ịnọ na Tofet,+ nke dị na ndagwurugwu ụmụ Hinọm,+ na-efe ofufe, ka onye ọ bụla ghara isurere* Molek+ nwa ya nwoke ma ọ bụ nwa ya nwaanyị n’ọkụ.+ 11 O mekwara ka ịnyịnya ndị eze Juda raara nye anyanwụ kwụsị isi n’ụlọ iri ihe+ nke Netan-melek, bụ́ onye na-eje ozi n’obí eze, nke dị n’ihe owuwu ụzọ mbata, na-abanye n’ụlọ Jehova; ọ gbakwara ụgbọ ịnyịnya anyanwụ+ ahụ ọkụ. 12 Eze kwatukwara ebe ịchụàjà niile ndị eze Juda wuru, bụ́ ndị dị n’elu ụlọ elu+ Ehaz, kwatusịakwa ebe ịchụàjà+ Manase wuru n’ogige abụọ ndị dị n’ụlọ Jehova, e mesịa, o gwepịara ha n’ebe ahụ, o wee wụfuo ntụ ha n’iyi ndagwurugwu Kidrọn. 13 Ebe ndị dị elu ndị dị n’ihu+ Jeruselem, n’ebe aka nri nke Ugwu Mbibi, ndị Sọlọmọn+ eze Izrel wuuru Ashtọret,+ bụ́ ihe arụ nke ndị Saịdọn, na nke o wuuru Kimọsh,+ bụ́ ihe arụ nke Moab, na nke o wuuru Milkọm,+ bụ́ ihe arụ nke ụmụ Amọn, ka eze mere ka a ghara ịnọkwa na ha na-efe ofufe. 14 O wee kụrisịa+ ogidi nsọ, gbutusịa ogwe osisi dị nsọ, werekwa ọkpụkpụ ndị mmadụ wụjuo n’ebe ha dịbu. 15 Ọ kwatukwara ebe ịchụàjà nke dị na Betel,+ bụ́ ebe dị elu nke Jeroboam+ nwa Nibat, bụ́ onye mere ka Izrel mehie,+ rụrụ, ọ kwaturu ọbụna ebe ịchụàjà ahụ na ebe ahụ dị elu. O wee gbaa ebe ahụ dị elu ọkụ; o gweriri ya ka ọ ghọọ ntụ, gbaakwa ogwe osisi ahụ dị nsọ ọkụ. 16 Mgbe Josaya tụgharịrị, ọ hụrụ ili ndị dị n’ugwu ahụ. O wee dunye ndị mmadụ, ha wee chịpụta ọkpụkpụ dị n’ili ndị ahụ ma suo ha ọkụ+ n’elu ebe ịchụàjà ahụ, ka o wee mee ka a ghara ịnọkwa na ya na-efe ofufe, dị ka okwu Jehova+ nke onye nke ezi Chineke kwuru si dị,+ bụ́ onye kwuru ihe ndị a. 17 O wee sị: “Nkume ili ònye ka m na-ahụ n’ebe ahụ?” Ndị obodo ahụ wee sị ya: “Ọ bụ ili+ onye nke ezi Chineke nke si Juda bịa+ wee kwuo ihe ndị a i mere ebe ịchụàjà dị na Betel.”+ 18 O wee sị: “Hapụnụ ya ka o zuo ike.+ Onye akpala ọkpụkpụ ya aka.” N’ihi ya, ha hapụrụ ọkpụkpụ ya na ọkpụkpụ onye amụma+ ahụ nke si Sameria bịa. 19 Josaya kwatukwara ụlọ+ niile nke ebe ndị dị elu dị n’obodo+ ndị dị na Sameria, bụ́ ndị ndị eze+ Izrel wuru ịbụ ihe mkpasu iwe,+ o wee mee ha ihe niile o mere na Betel.+ 20 Ya mere, o gburu ndị nchụàjà+ niile nke ebe ndị dị elu bụ́ ndị nọ n’ebe ahụ n’elu ebe ịchụàjà, kpọọkwa ọkpụkpụ ndị mmadụ ọkụ n’elu ha.+ E mesịa, ọ laghachiri na Jeruselem. 21 Eze wee nye mmadụ niile iwu, sị: “Meerenụ Jehova bụ́ Chineke unu ememme ngabiga+ dị ka e dere n’akwụkwọ ọgbụgba ndụ a.”+ 22 N’ihi na ọ dịghị ememme ngabiga e mere dị ka nke a, malite n’ụbọchị ndị ikpe bụ́ ndị kpere Izrel ikpe,+ e meghịkwa nke dị ka ya n’ụbọchị niile nke ndị eze Izrel na ndị eze Juda.+ 23 Ma, ọ bụ n’afọ nke iri na asatọ nke ọchịchị Eze Josaya ka e meere Jehova ememme ngabiga a na Jeruselem.+ 24 Josaya kpochapụkwara ndị na-agba afa+ na ndị ọrụ ha bụ ịkọ ọdịnihu+ nakwa terafim+ na arụsị na-asọ oyi ka nsị+ na ihe arụ+ niile ndị a hụrụ n’ala Juda nakwa na Jeruselem, ka o wee mezuo ihe e kwuru n’iwu+ ahụ e dere n’akwụkwọ+ ahụ Hilkaya onye nchụàjà hụrụ n’ụlọ Jehova.+ 25 Ọ dịghị eze bu ya ụzọ nke dị ka ya, onye ji obi ya dum na mkpụrụ obi ya dum+ na ike ya dum laghachikwuru+ Jehova, dị ka iwu dum nke Mozis si dị; ọ dịghịkwa onye dị ka ya biliri mgbe ọ nwụsịrị. 26 Otú ọ dị, Jehova emeghị ka iwe ya dị ọkụ dajụọ, bụ́ iwe dị ọkụ ọ na-eweso Juda+ n’ihi ihe niile na-akpasu ya iwe Manase mere ka ha mee.+ 27 Kama Jehova sịrị: “M ga-ewepụkwa Juda+ n’ihu m,+ dị nnọọ ka m wepụrụ Izrel;+ m ga-ajụkwa obodo a nke m họọrọ, ya bụ, Jeruselem, nakwa ụlọ ahụ nke m kwuru banyere ya, sị, ‘Aha m ga-adịgide na ya.’”+ 28 Ma ihe ndị ọzọ metụtara Josaya na ihe niile o mere, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Juda? 29 N’ụbọchị ya, Fero Niko+ eze Ijipt gbagotere wee bịakwute eze Asiria n’akụkụ osimiri Yufretis,+ Eze Josaya wee gaa izute ya;+ ma o gburu Josaya+ na Megido+ ngwa ngwa ọ hụrụ ya. 30 Ndị na-ejere ya ozi wee buru ya n’ozu n’ụgbọ ịnyịnya, si na Megido buru ya lọta Jeruselem+ wee lie ya n’ili ya. Ndị ala ahụ wee kpọrọ Jehoahaz+ nwa Josaya, tee ya mmanụ ma mee ya eze n’ọnọdụ nna ya. 31 Jehoahaz+ gbara afọ iri abụọ na atọ mgbe ọ malitere ịchị, ọ chịkwara ọnwa atọ na Jeruselem. Aha nne ya bụ Hamutal+ nwa Jeremaya onye Libna. 32 O wee malite ime ihe jọrọ njọ n’anya Jehova, dị ka ihe niile nna nna ya hà mere si dị.+ 33 Fero Niko+ wee tụọ ya mkpọrọ+ na Ribla+ n’ala Hemat, iji gbochie ya ịchị na Jeruselem, o wee rie ala ahụ iwu+ otu narị talent ọlaọcha+ na otu talent ọlaedo.+ 34 Fero Niko mekwara Elayakim+ nwa Josaya eze n’ọnọdụ Josaya nna ya ma gbanwee aha ya ka ọ bụrụ Jehoyakim. Ọ kpọkwaara Jehoahaz wee kpọta ya n’Ijipt, bụ́ ebe o mesịrị nwụọ.+ 35 Jehoyakim kwụrụ Fero ọlaọcha+ na ọlaedo ahụ. Ọ bụ naanị na ọ manyere ala ahụ ịkwụ ụtụ,+ iji kwụọ ọlaọcha ahụ Fero nyere n’iwu. Ọ naara ndị ala ahụ ọlaọcha na ọlaedo ahụ dị ka ụtụ isi+ e kenyere onye ọ bụla si dị, iji kwụọ ya Fero Niko. 36 Jehoyakim+ gbara afọ iri abụọ na ise mgbe ọ malitere ịchị, ọ chịkwara afọ iri na otu na Jeruselem.+ Aha nne ya bụ Zebaịda nwa Pedaya bụ́ onye si Ruma. 37 O wee na-eme ihe jọrọ njọ+ n’anya Jehova, dị ka ihe niile nna nna ya hà mere si dị.+
^ Otú e si dee ya n’asụsụ Hibru bụ “ime ka nwa ya nwoke ma ọ bụ nwa ya nwaanyị gabiga n’ọkụ.”
2 Ndị Eze 23